कोरोना संक्रमित कनिकाको नखराले अस्पतालका चिकित्सकदेखि नर्स हैरान |
कोरोना संक्रमित कनिकाको नखराले अस्पतालका चिकित्सकदेखि नर्स हैरान
२०७६, १३ चैत्र बिहीबार १५:०६ March 26, 2020 ताजा खबरबिदेश
मुम्बई । चार दिन अघि कोरोना भाईरस (कोबिड १९) को सँक्रमण देखिएपछि बनारसको सञ्जय गान्धी पीजीआईमा भर्ना भएकी बलिउड गायिका कनिका कपुरको उपचार क्रम जारी छ । तर उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छैन । कोरोनाको समस्याले भन्दा पनि यी गायिकाको अनाबस्यक मागले चिकित्सादेखि नर्ससम्म दिक्क भएका छन् । आईसुलेशनमा राखेर उपचार गरिरहेको अबस्थामा यी गायिकाले आफुले कुनै पनि सुविधा नपाएको टिप्पणी गरेकी छिन् । आफुलाई कैदीको जस्तो व्यबहार भएको यी गायिकाको टिप्पणी छ ।
आफुले सुविधा सम्पन्न जीवन बताउँदै आएकोले त्यो सुविधा अबस्पतालमा पनि पाउनु पर्ने यी गायिकाको माग छ । उनले आफ्नो उपचार भाईरहेको बनारसको पीजीआई सेन्टरमा पाँच तारे होटलको जस्तो सुविधा माग गरिरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । यतीबेला यी गायिकाको नखराका कारण चिकित्सक देखि नर्ससम्म दिक्क भएका छन् ।
गायिका कनिकाको अहिले भारतमा टिप्पणी भईरहेको छ । उनको चरम लापरवाहीको टिप्पणी भएको छ । गत साता लन्डनबाट आएकी उनी ज्वरो आउँदा आउँदै पनि सामान्य औषधी लिएर कन्सर्टमा सहभागी भईन् । एउटा विवाहको पार्टीमा कन्सर्ट दिएकी यी गायिकाको कारण यतीबेला त्यो पार्टीमा सहभागी ४०० जना सहित उनीहरुका परिवारसम्मेत उच्च निगरानीमा बस्नु परेको छ । ती सबैले कनिकाको लापरवाहीको पीडा आफुहरुले भोग्नु परेको बताएका छन् । गायिका कनिकाले सार्वजनिक रुपमा यो रोग फैल्याएको भन्दै उनी बिरुद्ध अपराध सम्बन्धि उजुरी पनि दर्ता गरिएको छ ।
गायिका कनिकाको हरेक ४८ घन्टामा कोरोना भाईरसको परीक्षण भईरहेको चिकित्सकहरुले जनाएका छन् । तेश्रो पटकको परीक्षणमा उनीमा हाईलोड कोरोना भाईरस पाईएको डा.नरेन्द्र अग्रवालले बताएका छन् । पहिलो पटक यी गायिकालाई कोरोना देखिएपछि अविश्वास गर्दै उनका परिवारले पनि रगत परीक्षण गर्न लगाएका थिए । दोश्रो पटक पनि कोरोना भाईरस पोजेटिभ देखिएपछि उनका परिवारसमेत चिकित्सकको उच्च निगरानीमा क्वारेन्टाईनमा छन् ।
२०७६, २५ चैत्र मंगलवार ११:४८
कोरोना भाइरस बनाएको आरोपमा डा. चार्ल्स पक्राउ परेका हुन् ? वास्तविकता थाह पाउँदा सबै चकित
२०७६, २५ चैत्र मंगलवार १०:०७
२०७६, २४ चैत्र सोमबार २२:३१
रोना त्रास : अरू मानिसको अगाडि खोकेपछि एक पुरुष पुगे जेलमा